Polyester အထည်ဆိုးဆေးစက် ဆိုတာဘာလဲ။ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ချိသူနှင့်စက်ရုံမှအကောင်းဆုံး Polyester အထည်ဆိုးဆေးစက် မှအကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေရန်
အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်အဖြစ် Taiwanကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်း Polyester အထည်ဆိုးဆေးစက် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နေဆဲပိုပိုကောင်းအလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန် get နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ clients များအတွက်လှပသောန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောအပေါ်အခိုင်အမာဆိုကြသည်။ အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
dual စီးဆင်းမှုစနစ်၏တီထွင်ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းသည်နိုင်ငံများစွာတွင်မူပိုင်ခွင့်တင်ထားပြီး overflow dyeing နှင့် jetflow dyeing များအတွက်သက်ဆိုင်ပါသည်။.ဒါဟာအပြည့်အဝလျှံဆိုးဆေးနှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်,အပြည့်အဝ jetflow ဆေးဆိုးသို့မဟုတ်တစ်ပိုင်း-ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်အညီ jetflow ဆေးဆိုး,ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလေးချိန်(700 ကျော် gm/yd)ထိုကဲ့သို့သောဝါဂွမ်းအဖြစ်ယက်သို့မဟုတ်ဇာထိုးထည်၏,ကော့တေး,သိုးမွှေး,polyester,နိုင်လွန်နှင့်ပေါင်းစပ်စသည်တို့ဖြစ်သည်.မူပိုင်ခွင့်ဆေးဆိုးစနစ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ,ဆေးပြားနဲ့တူအားလုံးချို့ယွင်းချက်,ဖွဲ့စည်းပုံပုံပျက်သောနှင့်တွန့အမှတ်အသားများလုံးဝတားဆီးနိုင်ပါတယ်.အပြင်,အလွန်ကောင်းမွန်သောကျုံ့ထိန်းချုပ်မှုကိုတင်းမာမှုမှတစ်ဆင့်ရရှိနိုင်သည်-ဇာထိုးအထည်များအတွက်လျတ်ဆေးဆိုး၏လျော့နည်း.
နိမ့်ကျခြင်းနှင့်ကြီးမားသောဝင်ရောက်ခွင့်တံခါးကိုလူ့အင်ဂျင်နီယာများအရဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်.ပလက်ဖောင်းမလိုအပ်ပါဘူး,လွယ်ကူပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်သည်.၎င်း၏အလေးချိန်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တင်းမာမှုအင်အားကိုလည်းလျော့နည်းစေသည်.အပြည့်အဝအလိုအလျောက်သို့မဟုတ်တဝက်-အော်တိုထိန်းချုပ်မှုစနစ် optioned နိုင်ပါသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.dyeing-machine.com/my/polyester-dyeing-machine.html
အကောင်းဆုံး Polyester အထည်ဆိုးဆေးစက် ကိုရှာဖွေပြီးစျေးဝယ်ရန်အတွက် Polyester အထည်ဆိုးဆေးစက် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားဖြန့်ဖြူးသူ၊ Taiwan
မြင့်မားသောအပူချိန် Rapid ဆိုးဆေးစက် အင်္ဂါရပ်များအစွန်းရောက်အနိမ့်အရက်အချိုး 1:4~5,ရေကို minimize လုပ်ပါ,ဓာတုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု,စွန့်ပစ်ရေသန့်သန့်ရှင်းရေးကိုလည်းကျဆင်းသွားသည်. ရွေးချယ်စရာ ရွေးချယ်စရာအထူးကိရိယာများ အမှန်တကယ်ထည်လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်လည်ပတ်မှုနှုန်းတစ်ခု၏လည်ပတ်ချိန်ကိုပြသနိုင်သည့်အပြင်ချုပ်ရိုးကိုအလိုအလျောက်ရှာဖွေပေးသည်. တိကျစွာရေအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်စီးဆင်းမီတာ. ဒုတိယဓာတုပစ္စည်းတိုင်ကီသည်ဆိုးဆေးနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများကိုသီးခြားစီပြင်ဆင်ရန်. ဆိုးဆေးအချိန်ဆိုးဆေးသက်သာစေရန်ရေကို preheating များအတွက် tank preheating. ယိုစီးမှုမြန်စေရန်စွမ်းအင်ယိုစီးမှုစနစ်. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်